“भाइटीकालार्इ २२ लाख माला”
स्वदेशी उत्पादनले तिहारको ९० प्रतिशत फूलको माग पूर्ति
काठमाडौं- फूलै फूलको चाड मानिन्छ तिहारलाई। तिहारमा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई फूलको माला लगाइदिने गर्छन्।
यम पञ्चकको दोस्रो दिन कुकुरलाई फूलको माला लगाइदिएर पूजा गरिन्छ। पहिलो दिन कागका लागि छुट्याइने परिकारमा फूल राखिन्छ।
लक्ष्मी पूजाका लागि पनि फूल अनिवार्य हुन्छ। गाई र गोवर्धन पूजाका लागि फूलको माला आवश्यक हुन्छ। लहरै सयपत्री र मखमली फुलेको देखिए तिहार आएको अनुभूति हुन्छ।
त्यसो त, हिन्दू धर्मावलम्बीले गर्ने हरेक पूजा, अनुष्ठानमा फूलको प्रयोग अनिवार्यजस्तै छ।
पछिल्लो समय नेपालमा फूल खेतीतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको छ। फ्लोरिकल्चर एसोसियसन अफ नेपालको तथ्यांकअनुसार १५ वर्षअघि बजार मागको ३० प्रतिशत मात्र थियो, आन्तरिक उत्पादन। तर, अहिले ९० प्रतिशत माग स्वदेशी उत्पादनले धानिरहेको छ।
एसोसियसनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा नेपालमा रु. १ अर्ब ८७ करोडबराबरको फूलको कारोबार भएको थियो। त्यसमध्ये रु. ११ करोड बराबरको मात्र फूल आयात भएको थियो।
व्यवसाय तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा रु. ११ करोडको फूल आयात हुँदा रु. २ करोडको निर्यात भएको थियो। केही वर्षयता नेपाली समुदाय रहेका विभिन्न मुलुकमा फूलको मालाको माग बढेको छ।
गत वर्ष अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, अमेरिका, हङकङलगायत मुलुकमा तिहारका लागि मखमली र सयपत्रीका १ लाख ५० हजार थान माला निर्यात भएको थियो। यस वर्ष पनि करिब २ लाख थान माला निर्यात हुने एसोसियसनका अध्यक्ष कुमार कसजु बताउँछन्।
आधुनिक प्रविधिबाट खेती र उन्नत जातको बीउ लगाउँदा फूलको उत्पादनमा वृद्धि भइरहेको उनको भनाइ छ ।
तिहारमा सबैभन्दा बढी माग हुने सयपत्री फूलको उत्पादन पनि बढिरहेको छ। कसजुका अनुसार यस वर्ष बजारमा २२ लाख मालाको माग छ। त्यसमध्ये सयपत्री फूलको मालाको माग १५ लाख छ। आन्तरिक उत्पादनमा भएको वृद्धिका कारण १२ लाख माला देशभित्रकै उत्पादनले धान्ने छ। बाँकी ३ लाख माला भारतबाट आयात गरिएको उनको भनाइ छ।
गत वर्ष सयपत्री फूलका १२ लाख मालाको माग रहेकामा ९ लाख स्वदेशी उत्पादनले धानेको थियो। र, ३ लाख माला आयात गरिएको थियो। गोदावरी र मखमली फूलको माला भने आन्तरिक उत्पादनले नै धान्दै आएको छ।
जाडो मौसममा नेपालमा फूलको उत्पादन घट्ने भएकाले पूर्ण रूपमा आयात प्रतिस्थान हुन समय लाग्ने कसजुको भनाइ छ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रदेश-३ मा फूलको उत्पादन र खपत हुने गर्छ। एसोसियसनका अनुसार प्रदेश-३ मा मुलुकको ६० प्रतिशत फूलको उत्पादन र खपत हुन्छ।